प्रचण्डले के भने वाम एकता र तालमेलबारे पार्टीका नेताहरुलाई ?
ARCHIVE, POLITICS » प्रचण्डले के भने वाम एकता र तालमेलबारे पार्टीका नेताहरुलाई ?
काठमाडौं - माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले - माओवादी पार्टी एकताको प्रस्ताव आफ्नो भएको बताएका छन् । पार्टी एकताको प्रस्ताव एमालेको र उसले तयार पारेको मस्यौदामा माओवादीले ‘जस्ताको तस्तै’ सहमति जनाएको नभई यसपटक एमालेसँग एकताको प्रस्ताव आफैंले राखेको दाहालले खुलाए ।
दाहालले यसलाई माओवादीको एमालेकरण र एमालेको माओवादीकरणको रूपमा कसैले पनि लिन नहुने भन्दै देशको आवश्यकताका आधारमा यस्तो निर्णयमा दुवै पार्टी पुगेको बताए ।दाहालले वाम एकताको प्रस्तावलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘हामीभित्र जे समस्या आइलागेको थियो । यो समस्याले हल पायो अब । बहसमा अब भट्टीभित्र छिरिने भइयो । हामी भट्टीभित्र खरानी भएर को-को सिद्धिने हो, कोको स्पात बनेर निस्कने हो ? हाम्रो टेस्ट हुनेवाला छ’, दाहालले भने । - एस काठमाडौँ